Inland Sea Pool Izindawo Eziqashwayo Zeholide & Amakhaya - Qrendi, i-Malta | Airbnb
Izindawo eziqashwayo zeholide ezinconywa kakhulu e- Inland Sea Pool
“UJosette unendawo emangalisayo. Zonke izici zokuhlala kwethu nenduduzo zacatshangelwa kahle. Lonke ikhaya linamafasitela nomnyango ukuvala izimbungulu ukuthi zilale kahle. Indawo iyindawo ebanzi futhi emphemeni wamachibi ayamangaza. Sasijabulela isikhathi sethu lapho. IMalta incane impela ngakho noma iyiphi indawo ofuna ukuyivakashela ihamba iDemo nje, ngasikhathi sinye ivikeleke ezindlini ezixakile zezivakashi zedolobha elingaphakathi. Indawo igcinwe ihlanzekile futhi icocekile. Kunokuthinta okuhle okufana nendawo yakho ye-larder nendawo efrijini yokudla kwakho. UJosette kulula kakhulu ukuhamba futhi wasenza sazizwa wamukelekile kakhulu.”
Amasevisi athandwayo ase- Inland Sea Pool ezindawo eziqashwayo zeholide
Ezinye izindawo ezinhle eziqashwayo zeholide e- Inland Sea Pool
Indawo esepulazini4.6 (10)